Iimpawu ezintsha zeGoogle Dlala ngokugxininisa kumbala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UGoogle unayo uhlaziye usapho lweevenkile kwivenkile yakho Umxholo wemultimedia athe wayibiza ngokuba nguGoogle Play kwaye uninzi lufikelela ekufumaneni iiapps, imidlalo yevidiyo, iincwadi, iimuvi kunye nomculo.
Kolu loyilo lutsha lweempawu zazo zonke iiapps ezinelizwi elithi «Dlala», ubeke jolisa kwiplanga elitsha lombala ezithi, endaweni yokujongeka ithambile njengoko zazinjalo kuyilo lwangaphambili, zigxininiswa ngakumbi ziithoni ezicacileyo kwaye ekugqibeleni zinika umbala omkhulu kuyo yonke. Uhlaziyo olulandelayo material Design.
Iiapps ezinje ngeGoogle Play Music, Dlala iincwadi okanye iiMidlalo zokuDlala nazo ziyafumana utshintsho kwindawo yelungu lomzali ngaphakathi kweyiphi unxantathu ngokwayo echaza ivenkile ye-Android xa iyonke kuzo zonke iintlobo zemixholo yemultimedia.
Ngale nto yokuhlaziya iGoogle ibonisa ukuba injani enye yezo nkampani ingahlali izolile okanye ikhululekile kuyilo kwiimpawu zayo, kodwa rhoqo ihlaziywa. Oku kukwaqinisekisa uphawu lwayo kwaye ngeli xesha, ngokusebenzisa le mibala icace gca, iyayinxibelelana ne-OS yayo yezixhobo eziselfowuni eziya zomelela kwaye zisebenza ngcono.
Njengoko besithethile kaninzi ilogo iyinxalenye ebalulekileyo ekuchongeni uphawu olunemibala, iimilo kunye nentsingiselo. UGoogle yenye yeenkosi kolu lwimi lubonakalayo olwenza ngokugqibeleleyo.
Into enomdla malunga nolu hlengahlengiso kwiimpawu kukuba, eyona nto isetyenzisiweyo, eyona isevenkileni, i utshintsho olucacileyo kuphela kukugxininisa ngombala njengabanye. Ezi icon zintsha ziya kufika kwiiveki ezizayo kuhlaziyo olutsha oluza kufumana iifowuni kwiifowuni ze-Android kunye neetafile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukuhlaziywa kweempawu ezintsha zikaGoogle zokudlala
ULuis Enrique Solis sitsho
Ngaba kuyinyani ukuba baya kuyibeka? Kulungile ukuba inyani ayiyonto imbi kangako kangangokuba bayitshintsha ngolu hlobo: 3
Phendula uLuis Enrique Solis
Ewe, kwiiveki ezimbalwa ezizayo